China Semi-mandeha ho azy Masinina mandrotsaka orinasa sy mpamatsy | Sofiq
Masinina manidina semi-mandeha ho azy dia sahaza ho an'ny asa amin'ny maody semi-automatique, tarihan'ny mpandraharaha miaraka amin'ny joystick.
Masinina manidina semi-mandeha ho azy dia sahaza ho an'ny asa amin'ny maody semi-automatique, tarihan'ny mpandraharaha miaraka amin'ny joystick. misy ladle mandatsaka miendrika mpankafy, milina fanodinana servo, rafitra lalamby mitondra fiara lava, rafitra famindrana, rafitra fanaraha-maso sy rafitra asa, rafitra azo antoka, fitaovana tariby, fitaovana fampidirana renirano sns. Miaraka amin'ny fahalalahana telo amin'ny dia lavitra, fitsangatsanganana ary fitetezana fitetezana izy io dia be mpampiasa amin'ny karazana tsipika famolahana ho an'ny vy volondavenona, vy fantsom-boankazo, tafiditra ao ny famolavolana tavoahangy ary tsipika famolavolana tsy misy fako.
1. Fisafidianana sahaza ny afovoan'ny fihodinana, mora ampiasaina, azo averina aorina aorian'ny fandatsahana azy.
2. Ny fampiasana kapila kankana indroa. Na dia avo aza ny fepetra takiana amin'ny famokarana, malefaka ny fandefasana ary tsara ny fihodinanan'ny lafiny roa.
3. Ny tehina fananganana dia vita amin'ny forging, izay azo antoka sy azo antoka kokoa noho ny vy vy vy.
4. Ny vatan'ny vatana dia matevina kokoa, ary ny firafitry ny ambany dia mandray fiantohana telo miaraka amina fitambaran-kitapo, hoop ary fametahana ambany, izay manalava ny androm-piainan'ny serivisy ary miantoka ny fiarovana ny mpandraharaha.
5, ny vatana lehibe sy ny fipoahana, ny reducer ary ny kodiarana tanana, dia misy karatra rojo vy azo mihidy amin'ny fotoana rehetra.
6. Ny trunnions roa sy ny boom dia miaraka amina bearings mampifanaraka tena, ary ny mifanaraka dia tsara.
Fampiharana ladle fananganana vy
Tavoahangy metaly mafana ho an'ny asa fanariana vy, aorian'ny fanaovana ranoka vy eo alohan'ny lafaoro, alefaso any amin'ny toerana maodely fanariana handrotsahana fiara mandeha.
Ladle ho an'ny orinasa mpanao vy, fametahana vy ao am-patana, lafaoro na vy niova ho mpanova, asa fanariana alohan'ny hanaovana..Ny tena mampiavaka azy dia: ny famolavolana foibe rotary dia mitombina, ny lalana azo averina amin'ny lalana roa, fototra hamerenana. karazana fifandimbiasana rotary dia manana fifindrana lefitra turbine roa làlana, fifindrana tsara, fiasa mety, tsy fitoviana tsara. mandeha avy any amin'ny lavarangana fanidiana hidin-trano no manana karazana avo, avo roa heny ny fikorontanana, ny fahombiazan'ny fanidiana tena dia mahery, maivana maivana azo alefa amin'ny hery ivelany kely, miverina haingana, aza kowtow, ny fampiasana azo antoka sy azo antoka.
Ny ladle dia ampiasaina amin'ny fanariana vy. Rehefa avy nalaina nanoloana ny lafaoro ny vy dia entina mankany amin'ny lasitra ho an'ny
Fitaterana ladle: Amin'ny crane na forklift.
Ladle capacité: 1000kg-2500kg.
Hafainganana: 15-22kg / seg.
Teo aloha: Fiara Pallet
Manaraka: Tsipika famolavolana semi-mandeha ho azy
Fandefasana fantsom-pandefasana fasika fampiasa fantsom-pandefasana f ...
Tsindry fanamafisana tsindry
Fandefasana fantsom-pandrosoana fitrandrahana fasika amin'ny famolavolana ...
Milina Punch Out, Masinina fanodinana semi-mandeha ho azy, Masinina bobongolo, Sandbox, Famolavolana tavoahangy, Famolavolana koveta fanariana,